बिहानको पैदल यात्राका लाभहरू - स्वास्थ्य
बिहानको पैदल यात्राका लाभहरू
कहिले सोच्नुहोस् कि ती मानिसहरु को लागी के उत्प्रेरित गर्छन जसले हरेक दिन बिहानको घर मा आफ्नो घरबाट बाहिर लुक्छन् र राम्रो लागी आफ्नो लागी बिहानको पैदल यात्रा ? ठिक छ, तिनीहरू राम्रा कुरामा स्पष्ट छन् किनकि अनुसन्धानले देखाउँदछ कि दिनको कुनै पनि समयमा व्यायाम गर्दा तपाईंको कार्डियो तालहरू उठाउँदा फाइदा हुन्छ र बिहान सबेरै पम्प गर्दा तपाईंको दिमाग र शरीरलाई केही थप फाइदा हुन्छ। हामी तपाईंलाई सबै कारणहरूमा लैजान्छौं किन तपाईंले आफ्नो सुस्तता त्याग्नु पर्छ र त्यो बिहानको पैदल यात्राको लागि जानुहोस्।
समावेशको बारेमा राम्रो भाग बिहान तपाईंको दैनिक तालिकामा हिंड्नुहोस् यो कति सजीलो गर्न सकिन्छ त्यहाँ खरीद गर्न कुनै महँगो फिटनेस सेन्टर सदस्यता छैन र तपाईंको तालिकाको कुनै प्रमुख रीजिंग आवश्यक छैन यो तपाईंलाई बिहानको पैदल यात्रा शुरू गर्न तपाईंलाई लागी केहि प्रेरणा र प्रशिक्षकहरूको राम्रो जोडी हो! त्यसो भए, के तपाईं सबै आफ्नो आसीन ढिलाई हिलाउने र यसमा सामेल हुन तयार हुनुहुन्छ प्रभात वाकर ब्रिगेड?
१ बिहानको पैदल यात्राका लाभहरू
दुई बिहानको पैदल जीवनशैली रोगको रोकथाम
3 बिहानको हिंडाइले चिनीको स्तर नियन्त्रणमा राख्छ
चार प्रभात चालले शरीरको फ्याट पग्लन्छ
।। बिहानको पैदल यात्राले मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछ
। बिहानको पैदल यात्राले मुटुलाई बलियो बनाउँदछ
।। बिहानको पैदल यात्राले तपाईंलाई अझ राम्रो बनाउँछ
।। प्रभातफेरी FAQ हरू
तपाईले तर्क गर्न सक्नुहुन्छ कि पैदल हिड्दै छ, जुन दिनको जुनसुकै समय तपाइँले गर्न रोज्नुभयो र तपाइँ गलत हुनुहुने छैन। जे होस्, एक बिहानको पैदल ईच्छाको साथ एक कार्डियो पसिना काम गर्दै तपाईंको मेटाबोलिज्म माथि पूरा दिन को लागी र तपाइँ उत्साहित र केहि लिन को लागी तयार राख्नुहोस्।
साथै, लिदै बिहानको पैदल बानी सजिलो छ किनकि तपाईको दैनिक तालिकाबाट विचलित गर्न थोरै अवरोधहरू छन्। अध्ययनहरूले यो पनि भन्छ कि धैर्यताको स्तर बिहानको तुलनामा साँझको तुलनामा उच्च छ त्यसैले तपाईं आफैंलाई बढी धक्का दिन सक्षम हुनुहुनेछ र थप क्यालोरीहरू जलाउनुहोस् दिनको अन्य कुनै समय भन्दा बिहानको हिंड्ने समयमा।
सुझाव: बिहान हावा प्रदूषण तल्लो तर्फ पनि हुन्छ जब सवारी साधन ट्राफिकले हाम्रा शहरहरू धुवाँले धमिलो पार्दछ अघि तापक्रम तल्लो तर्फ छ साथै बिहान पनि बाहिर प्रयोग गर्न सबैभन्दा सहजै समय हो।
बिहानको पैदल जीवनशैली रोगको रोकथाम
अध्ययनहरूले देखाए कि बिहानको पैदल यात्रा मधुमेह, थाइरोइड, उच्च रक्तचाप जस्ता जीवनशैली रोगहरूको लक्षणहरूलाई रोक्न वा कम गर्नमा धेरै फाइदाजनक छ। यी रोगहरूको संयोजन उच्च स्तरको ट्राइग्लिसेराइडहरू र एचडीएल कोलेस्ट्रोलको कम तहको साथ मेटाबोलिक सिन्ड्रोम जो एक हृदय रोग को लागी एक जोखिम पैदा गर्दछ।
सुझाव: विज्ञहरू भन्छन् कि केवल तीन घण्टामा संलग्न एरोबिक व्यायाम जस्तै हरेक हप्ता बिहान हिंड्ने मेटाबोलिक सिन्ड्रोम हुने सम्भावनाहरूलाई by० प्रतिशतले कम गर्दछ।
बिहानको हिंडाइले चिनीको स्तर नियन्त्रणमा राख्छ
कसरी टाउकोमा स्कार्फ राख्ने
को व्यापकता टाइप २ मधुमेह भारतमा महामारीको स्तरमा पुगेको छ। हालसालैको द लान्सेट डायबेटिस एन्डोक्रिनोलजी पत्रिकामा गरिएको अध्ययनले भनेको छ कि २० 20० सम्ममा करिब 98 million करोड भारतीयहरू टाइप २ डायबेटिसबाट ग्रस्त हुनेछन्। यदि तपाईं मधुमेहबाट पीडित हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो उन्नतित चिनीको मात्रा बिहान 30० मिनेट पैदल हिँड्न सक्नुहुन्छ।
हिंड्दा कोशिकालाई रक्तप्रवाहमा ग्लूकोजको अधिक प्रभावकारी प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ। मधुमेहलाई पनि आफ्नो वजन कम्तिमा १० प्रतिशत घटाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र यहाँ पनि क्यालोरी जलिरहेको बिहानको हिंड्ने धेरै ठूलो सहयोग हो।
सुझाव: यो निश्चित गर्नुहोस् कि चोटपटकबाट बच्न तपाईंले हिड्ने जुत्ताको उचित जोडी लगाउनुभयो।
प्रभात चालले शरीरको फ्याट पग्लन्छ
बिहानको पैदल व्यायाम एक धेरै सजिलो तरीका जस्तो लाग्न सक्छ जब तपाईं यसलाई जिम दिनचर्यामा तुलना गर्नुहोस् वा बाहिर कामको अधिक गहन प्रकारहरू। यद्यपि अध्ययनले देखायो कि बिहानको पैदल यात्रा प्रभावकारी हुन्छ यो जलेको बोसो को लागी आउँछ जब। वास्तवमा, कम-तीव्रता कार्डियो जस्तै हिंड्दा फ्याटबाट percent० प्रतिशत क्यालोरी जलाउँछ।
जबकि उच्च-तीव्रता अभ्यास तपाईंलाई दिन सक्छ राम्रो बोसो घाटा परिणाम समग्र, बिहानको पैदल यात्राले तपाईंको मुटुको दर बढाएर र तपाईंलाई राम्रो कार्डियो कसरत दिएर तपाईंलाई फेरि आकारमा फर्काउन मद्दत गर्दछ।
सुझाव: बिहानको पैदल दुरीको मांसपेशीहरू र ग्लुटहरू जस्ता तपाईंको कम शरीरको मांसपेशीहरू टोन गर्न उत्कृष्ट छ। यो पनि तपाइँको कोर कडा गर्न सक्छ यदि तपाइँ एक बनाए राम्रो आसन हिड्दै गर्दा
बिहानको पैदल यात्राले मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछ
तपाईंको दिनको सुरूवातमा केही व्यायाम प्राप्त गर्ने उत्तम तरिकाको अलावा, बिहानको हिंडाइले तपाईंलाई पनि आनन्दित तुल्याउँछ र बाँकी दिनको लागि एक सकारात्मक टोन सेट गर्दछ। त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् बिहानको पैदल यात्राले तपाईंको मानसिक सुस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछ ।
शुरुवातकर्ताहरूको लागि, तेज व्यायामले एन्डोरफिनहरू रिलीज गर्दछ - खुशीको हार्मोनहरूले तपाईंलाई मूड दिन्छ कि उर्जाको हडबडीले तपाईंलाई बाँकी दिनको लागि पुन: सुधार गर्दछ, र अध्ययनले देखायो कि छिटो हिड्दै आधा घण्टा देखि एक घण्टा को लागी उदासिनता पीडितहरु मा एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव छ। हिँड्दा पनि तपाइँको मेमोरी रक्षा गर्न र तपाइँको संज्ञानात्मक कौशल सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको दिमागमा अक्सिजन र रगतको भीडले तपाईंको दिमागलाई सचेत गराउँदछ र मस्तिष्कको कार्य सुधार गर्दछ। वास्तवमा जहाँसम्म मस्तिष्कको कामको सवाल छ पैदल यात्राको अधिक महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू छन् 60० बर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिहरूको लागि, उमेर सम्बन्धित स्मृति गिरावट र गिरावट रोक्दै।
सुझाव: तपाईंको बिहानको पैदल यात्रालाई साथीमा पोखाउनुहोस्। केहि कुराकानीमा समात्नुहोस् जब तपाईं आफ्नो फिटनेस लक्ष्यहरू सँगै पुग्ने लक्ष्य राख्नुहुन्छ।
बिहानको पैदल यात्राले मुटुलाई बलियो बनाउँदछ
नियमित रूपमा तपाईको बिहानको हिंडाइमा जाँदा मुटु सम्बन्धी समस्याहरूलाई रोक्नुहोस्। अमेरिकी हार्ट एसोसिएशनका अनुसार तपाईले मुटु रोग लाग्ने जोखिम कम गर्न सक्नुहुन्छ र तेज चालमा स्ट्रोक हरेक दिन minutes० मिनेट को लागी। यो सबै लाग्छ तल्लो रक्तचाप , ट्राइग्लिसराइड स्तर र हानिकारक LDL कोलेस्ट्रॉल कम गर्नुहोस्। वास्तवमा, यो सुनौलो आधा घण्टाको बिहान व्यायाम हप्तामा चार वा पाँच पटक तपाईंलाई स्ट्रोकबाट पनि सुरक्षित राख्न सक्छ, दक्षिण क्यारोलाइना विश्वविद्यालयको रिपोर्टले भन्छ।
सुझाव: यदी तिमी बाहिर चल्दै सहज र सहज हिड्न को लागी एक मार्ग छनौट गर्नुहोस्। टुक्रिएको फुटपाथ र गड्ढाबाट सवारी सडकहरू वेवास्ता गर्नुहोस्।
बिहानको पैदल यात्राले तपाईंलाई अझ राम्रो बनाउँछ
नियमित बिहान हिंड्ने तपाईंको समग्र स्वास्थ्य परिमिति सुधार गर्न र नतिजाको रूपमा, तपाईं आफैले थोरै मेड्स तपाईंको पोपिंग भन्दा पहिले पप्पिंग गर्दै पाउनुहुनेछ। वास्तवमा विज्ञहरू भन्छन कि नियमित बिहानको पैदल यात्राको लागि जाँदा तपाइँलाई एक बर्ष सम्म बाँच्न सक्छ। हिड्दै रक्त परिसंचरण सुधार गर्दछ र शरीरमा अक्सिजनको आपूर्ति गर्दछ र यसले राम्रो प्रतिरक्षा निम्त्याउँछ।
सुझाव: सामान्य स्वास्थ्य सुधारको अलावा, बिहान हिंड्नुलाई तपाईंको दैनिक तालिकाको एक हिस्सा बनाउँदा तपाईंलाई केही भयानक सौन्दर्य लाभहरू पनि दिन्छ। यसले बुढेसकालको प्रक्रियालाई ढिलो बनाउँदछ र तपाईंको छालालाई स्वस्थ चमक प्रदान गर्दछ र रक्तसंचारमा सुधार ल्याएर कपालको गुणस्तर सुधार गर्दछ ।
अनुहार मा बेकिंग सोडा को उपयोग
प्रभातफेरी FAQ हरू
Q. कति बेर म बिहान हिंड्नु पर्छ?
TO डाक्टरहरूले सल्लाह दिन्छन् कि तपाईंले कम्तिमा minutes० मिनेटमा फिट हुन प्रयास गर्नुहोस् छिटो बिहानको पैदल यात्रा एक दिनमा, हप्तामा चारदेखि पाँच पटक। यदि तपाईं आफू लामो समयसम्म हिंड्न असमर्थ हुनुभयो भने, सुरुमा, आफूलाई सानो गोल दिनुहोस् र १० देखि १ minutes मिनेट हिंड्ने प्रयास गर्नुहोस्, बिस्तारै समय बढाउँदै।
Q. के बिहानको हिंडाइले मलाई तौल घटाउन मद्दत गर्दछ?
TO हो, बिहानको हिंडाइले तपाईंलाई कुनै अवधिको समयमा बोसो र क्यालोरीहरू जलाउन मद्दत गर्दछ। जबकि यो उच्च तीव्रता व्यायाम को रूप मा अधिक नहुन सक्छ, यो अझै पनि लामो दौडमा तौल को पैमाने मा एक फरक पार्छ।
Q. के बिहानको पैदल यात्राले मलाई मेरो मधुमेह नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ?
TO हो, बिहानको पैदल यात्रा कम गर्नका लागि धेरै सहयोगी हुन्छ चिनी स्तर र तपाइँ तपाइँको चिनी पठन मा चाँडै फरक देख्नुहुनेछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं कम्तिमा minutes० मिनेट जति हिंड्नुहुन्छ। हिंड्ने बारेमा राम्रो पक्ष भनेको तपाईंले गतिविधि सुरू गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले त्यसो गर्ने बित्तिकै थाल्नुभयो, तपाईंलाई जिममा सदस्यताका कुनै उपकरणहरू आवश्यक पर्दैन।
भूतान रानी जेटसन पेमा चित्रहरु
सर्वश्रेष्ठ कोरियाली ड्रामा चलचित्रहरू
सिंह राशिफल प्रेम खेल
पतिको साथ gad gadot
मेरो सबै भन्दा राम्रो मित्र को लागी सबै भन्दा राम्रो उद्धरण